Jeremia 26 - Ny Baiboly
Jeremia toko 26
Adin'i Jeremia sy ny mpisorona amam-paminany sandoka - Ny mpanapaka sy ny loholona miaro an'i Jeremia.
1Tamin'ny niandohan'ny nanjakan'i Jodàkima, zanak'i Josiasa, mpanjakan'i Jodà, no nahatongavan'izao teny izao, avy amin'ny Tompo, ho amin'i Jeremia.
2Izao no lazain'ny Tompo: Mitsangàna hianao eo an-kianjan'ny tranon'ny Tompo, ka lazao amin'izay avy amin'ny tanànan'i Jodà rehetra izay tonga hivavaka ao an-tranon'ny Tompo, ny teny rehetra nasaiko hambaranao aminy; aza misy amelana na dia teny iray aza. 3Angamba hihaino ihany izy, ka samy hiverina hiala amin'ny làlan-dratsiny avy; dia hanenenako ny loza nokasaiko hamelezana azy, noho ny haratsian'ny ataony. 4Lazao aminy hoe: Izao no lazain'ny Tompo: Raha tsy manaiky ahy hianareo ka tsy manaraka ny lalàna nataoko eo anoloanareo; 5tsy mihaino ny tenin'ny mpaminany mpanompoko, irahiko ho any aminareo, sady nirahiko hatramin'ny vao maraina, kanefa tsy nohenoinareo, 6dia hataoko tahaka an'i Silao ity trano ity, ary hataoko fanozonana amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ity tanàna ity.
7Ren'ny mpisorona amam-paminany mbamin'ny vahoaka rehetra ny nilazan'i Jeremia ireo teny ireo, tao an-tranon'ny Tompo. 8Nony tapitra voalazan'i Jeremia avokoa izay nasain'ny Tompo nolazaina amin'ny vahoaka rehetra, dia nosamborin'ny mpisorona amam-paminany mbamin'ny vahoaka rehetra izy, sady nataony hoe: Ho faty hianao! 9Ahoana no aminanianao amin'ny anaran'ny Tompo hoe: Ho tahaka an'i Silao ity trano ity, ary ho lao tsy misy mponina ity tanàna ity? - Dia nitangoronan'ny olona rehetra tao an-tranon'ny Tompo Jeremia. 10Nony nandre izany zavatra izany ny loholon'i Jodà, dia niakatra avy any an-tranon'ny mpanjaka izy, nankao an-tranon'ny Tompo, ka nipetraka teo anoloan'ny vavahady Vaovao amin'ny tranon'ny Tompo. 11Dia hoy ny mpisorona amam-paminany tamin'ireo loholona sy ny vahoaka rehetra: Mendrika hovonoina ity lehilahy ity, fa naminany loza hanjo ity tanàna ity, araka ny efa ren'ny sofinareo.
12Fa niteny tamin'ny loholona rehetra sy ny vahoaka rehetra Jeremia nanao hoe: Iaveh no naniraka ahy haminany ny zavatra rehetra efa renareo, hamelezana ity trano ity. 13Koa ankehitriny, ahitsio ny lalànareo sy ny ataonareo; ary mihainoa ny feon'ny Tompo Andriamanitrareo, dia hanenenan'ny Tompo ny loza nolazainy hamelezana anareo. 14Ary ny amiko, dia inty aho, eto an-tànanareo, ka ataovy amiko izay ataonareo ho mety sy marina. 15Fantaro anefa, fa raha mamono ahy hianareo, dia handatsaka ra tsy manan-tsiny aminareo sy amin'ity tany ity, ary amin'ny mponina eo aminy, satria Iaveh marina tokoa, no naniraka ahy ho atý aminareo hilaza ireo teny rehetra ireo ho ren'ny sofinareo. 16Dia hoy ny loholona mbamin'ny vahoaka rehetra, tamin'ireo mpisorona sy ireo mpaminany: Tsy mendrika hovonoina ity lehilahy ity, satria tamin'ny anaran'ny Tompo Andriamanitsika no nitenenany tamintsika. 17Ary ny sasany tamin'ny loholona amin'ny tany, nitsangana nilaza tamin'ny olona rehetra vory teo, nanao hoe: Tamin'ny andron'i Ezekiasa mpanjakan'i Jodà, 18Mikea avy any Moresheta dia naminany, ka nilaza tamin'ny vahoakan'i Joda rehetra hoe:
Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika:
Hasaina toy ny tanimboly Siona;
hanjary antontan-java-drava Jerosalema
ary havoana mijoalajoala ny tendrombohitra misy ny tempoly.
19Ka moa namono azy va Ezekiasa sy Jodà rehetra? Tsy natahotra an'ny Tompo ahay va izy ireo? Tsy nifona tamin'ny Tompo va izy? Dia nanenenan'ny Tompo ny loza nolazainy hamelezana azy ireo. Ary isika kosa ve, hanao heloka be vava, hampidi-doza amin'ny fanahintsika? 20Nisy lehilahy anankiray koa, naminany tamin'ny anaran'ny Tompo, dia Oria, zanak'i Semeia, avy any Kariatiarima; izay novinanin'i Jeremia indrindra no novinaniny, hanjo an'ity tanàna ity, sy ity tany ity. 21Nandre ny teniny Joakima mpanjaka, mbamin'ny lehilahy maheriny rehetra sy ny mpanapaka rehetra, ka nitady hamono azy ny mpanjaka. Nahare izany Oria, ka natahotra, dia nandositra tany Ejipta. 22Fa naniraka olona ho any Ejipta, Joakima mpanjaka, dia Elnatana, zanak'i Akobora, ary olon-kafa koa niaraka taminy, ho any Ejipta. 23Ka nalain'ireo hiala tany Ejipta, Oria, dia nentiny teo amin'i Joakima mpanjaka, ary io kosa namono azy tamin'ny sabatra, dia nanipy ny fatiny, teo amin'ny fasan'ny ankapobem-bahoaka. 24Fa ny tànan'i Ahikama zanak'i Safana kosa dia nanohana an'i Jeremia. Ka tsy natolotry ny vahoaka hovonoin-ko faty izy. >